Izibalo namaqiniso we-Instagram angama-35 (2020) - Konke Owaguqile Ukukwazi - Komphakathi
I-Instagram yasungulwa ngo-2010 ngumqambi wekhompyutha nowayesebenza kuGoogle uKevin Systrom nonjiniyela wesoftware uMichel Krieger. Yize izinhlelo zabo zokuqala zifaka phakathi ukukhishwa kohlelo lokusebenza lokwabelana ngendawoI-Burbn, ozakwethu kamuva bahlala ohlelweni lokwabelana ngezithombe ngezihlungi eziningi ezisebenzayo. Futhi-ke, kwavela isicupho somlutha kakhulu seshumi leminyaka(Ngokuzimisela, umuntu uyeka kanjani ukuskrola?).
Okuqale njengesicelo esingenacala sokuthi abantu babelane ngamadivayisi we-duck face selfies namamenyu kwasekuseni manje sekugcwele ngamagama amakhulu nabakhangisi abafuna yonke into oyikhonzile. Ithebhu yokuthenga, izikhangiso ezingamakiwe ezingadukisa abasebenzisi, nezici ezahlukahlukene ezilungiselela kakhulu abakhangisi kunabasebenzisi bazo, i-Instagram izithola isibhekene nezibuyekezo eziya ngokuya zingajabulisi nsuku zonke. Noma kunjalo uhlelo lokusebenza lukwazi ukuqoqa enye yezinombolo zokuzibandakanya ezihlaba umxhwele kakhulu. Eqinisweni, ukuxhumana komsebenzisi kukhula njalo ngonyaka owodwa.
Izibalo ezingaphezulu ongazihlola
Izibalo Ze-YouTube - Amaqiniso Amangalisayo
Izibalo namaqiniso we-Instagram:
Awusikholwa? Nawa amaqiniso nezinombolo ezimbalwa mayelana nohlelo lwakho lokusebenza oluthandayo:
1) Abasebenzisi abayizigidi eziyizinkulungwane emhlabeni wonke
I-Instagram ifinyelele kubasebenzisi bayo abayizigidi eziyinkulungwane ngoJuni ka-2018, futhi leyo nombolo kusolwa ukuthi ingaphezulu ngo-2020. Kepha uma kunenkampani ethanda ukugcina izibalo zayo ingaphansi kakhulu kwe-wraps, inombolo ethize kunzima ukuyithola.
2) i-United States ihamba phambili nabasebenzisi abasebenza kakhulu be-Instagram
Kusukela ngo-Okthoba 2020, i-Instagram yathola abasebenzisi abacishe babe yizigidi eziyi-140 e-United States. I-India ikleliswe endaweni yesibili ngezigidi eziyi-120 kwathi iBrazil yaba isithathu ngabasebenzisi abayizigidi ezingama-95. Iningi labasebenzisi baseNdiya lithuthele ku-Instagram ngemuva kokuvinjelwa kweTikTok ekuqaleni kukaJuni.
3) IKazakhstan ibekwe kuqala njengezwe elinabalaleli abaningi be-Instagram abafinyelela kakhulu
Umsebenzi wezithameli usho ukubalwa kwabasebenzisi be-Intanethi abafinyelela kokuqukethwe kanye / noma ukukhangisa ngohlelo lwe-inthanethi olulodwa noma eziningi. IKazakhstan ilinganisa ukuthi izithameli zayo ze-Instagram zifinyelela kuma-72%, zilandelwe yiBrunei ngama-71% ne-Iceland ngama-67%. Lolu cwaningo oluthile lubandakanya amazwe nezindawo ezinabantu abangama-50,000 nabangaphezulu.
4) Abasebenzisi abasebenza nsuku zonke bezindaba ze-Instagram
Abasolwa ekuqaleni ngokukopisha isici esikhulu se-Snapchat, i-Instagram Stories ivumela abasebenzisi ukuthi bathumele izithombe nokulandelana kwamavidiyo okunyamalayo ngemuva kokuphela kwehora lama-24. Ngemuva kokudalulwa kwayo kokuqala ngo-2016, lesi sici saqoqa abasebenzisi abayizigidi eziyikhulu. Futhi ngo-2019 uhlelo lokusebenza lwabika abasebenzisi abayizigidi ezingama-500 bezindaba ezisebenzayo nsuku zonke.
5) 3rdukhetho oluthandwa kakhulu kwezokuxhumana nabantu abasha base-US phakathi kuka-2012 no-2020
Ocwaningweni lwango-2020, i-34% yentsha yase-US ibike ukuthi iSnapchat bekuyiyona ndlela engcono kakhulu yokuxhumana nabezindaba, ilandelwa yiTikTok ethathwe ngama-29%. I-Instagram ikleliswe endaweni yesithathu kwathi abasebasha abangama-23% base-US bangabasebenzisi abakhuthele futhi bancamela ezinye izinhlelo zokuxhumana.
I-6) Inkinobho ye-Like ifika izikhathi ezingama-4.2 billion ngosuku
Inkinobho ethi Like mhlawumbe iyona enhle kunazo zonke,ethandekayoisici kuzo zonke izingosi zokuxhumana nabantu. Kepha i-Instagram ithole ukuthandwa okungaba yizigidi eziyizinkulungwane eziyi-4.2 ngabasebenzisi emhlabeni wonke, ngosuku olulodwa nje. Lokhu kubonisa ukuzimisela kwezilaleli ukuzibandakanya nokubamba iqhaza ngohlelo nangokungaqondile, nabakhangisi.
7) Izinombolo zabasebenzisi kulindeleke ukuthi zande eminyakeni ezayo
Ngo-2019, isicelo sithengwe kubasebenzisi abayizigidi ezingama-855 ngenyanga. Ngo-2023, lesi sibalo kulinganiselwa ukuthi sidlula abasebenzisi abayizigidi ezingama-980, okusenza sibe ngesinye sezinkundla zokuxhumana ezitholakala kakhulu emhlabeni wonke.
8) Ukusatshalaliswa kwabasebenzisi emhlabeni wonke ngobudala nobulili, kusukela ngo-Okthoba 2020
Abasebenzisi abaneminyaka engu-13-17 no-25-34 banenombolo ecishe ifane yabasebenzisi besilisa nabesifazane.Ama-3.6% amantombazane nabesilisa abangu-3.5% kubakaki beminyaka eyi-13-17. Eminyakeni yobudala engama-25-34, i-16.5% ngabesifazane kanye nabesilisa abangu-16.6%. Kodwa-ke, i-15.7% yabasebenzisi abasebenzayo emhlabeni wonke ngabesilisa abaneminyaka ephakathi kuka-18 no-24, no-13.9% wabesifazane.
Ngaphezu kwesigamu sabasebenzisi be-Instagram emhlabeni jikelele sineminyaka engama-34 noma ngaphansi.Lezi zinombolo zehla kakhulu kubantu abaneminyaka engama-35-44, kuthi u-8.6% wabo kube ngabesifazane bese kuthi abesilisa babe ngu-7.3%. Ukwehla ngokuqhubekayo, i-4.8% ngabesifazane kanye ne-3.5% yabesilisa ebangeni lobudala be-45-54. Bangu-1.5% kuphela abesilisa no-2.3% wabesifazane abaneminyaka engaphezu kwengu-55 abasebenzisa i-Instagram.
9) Ukusatshalaliswa kwabasebenzisi be-Instagram emhlabeni wonke ngobulili, kusukela ngo-Okthoba 2020
Izithameli ezithintekayo ze-Instagram kubikwa ukuthi zingamaphesenti angama-51 abesifazane kanye namaphesenti angama-49 abesilisa. Lo mehluko ongu-1% ubangelwa ikakhulu amadoda ambalwa aneminyaka engama-35 nangaphezulu ekubeni ngabasebenzisi abasebenzayo bohlelo lokusebenza.
10) Ukusatshalaliswa kwabasebenzisi be-Instagram emhlabeni jikelele kusukela ngo-Okthoba 2020, ngeqembu leminyaka
U-33.1% wabasebenzisi be-Instagram baneminyaka ephakathi kweminyaka engama-25 nengama-34. Lokhu kwenza uhlelo lokusebenza luhehe ngokukhethekile kubakhangisi kwazise isigaxa esikhulu sabasebenzisi bohlelo lokusebenza senziwa ngabantu abenza futhi basebenzise imali yabo. Inombolo yesibili yabasebenzisi ilele ebangeni leminyaka eyi-18-24 (29.6%) elandelwa ngabantu abadala abaphakathi kweminyaka engama-35 nengama-44 (15.9%). Cishe u-7.1% wesisekelo somsebenzisi wenziwe ngentsha eneminyaka ephakathi kuka-13 kuya ku-17 no-8.3% wesisekelo sabasebenzisi ngabantu abaneminyaka engamashumi amane nanamashumi amahlanu.
11) Amaphesenti abantu abadala base-US abasebenzisa i-Instagram ngesizinda semfundo, kusukela ngoFebhuwari 2019
Izibalo zikhomba ukuthi ama-43% wabasebenzisi be-Instagram e-United States bathole iziqu zasekolishi. Ama-37% anemfundo ethile yasekolishi futhi cishe ama-33% aphothule iziqu ezikoleni eziphakeme noma ngaphansi.
12) Ukuzibandakanya Komsebenzisi ngosuku
Uhlelo lokusebenza lunezinga eliphakeme kakhulu lokuzibandakanya komsebenzisi, iqiniso elijabulisayo labakhangisi. Ama-63% wabasebenzisi be-Instagram ahlola uhlelo lokusebenza okungenani kanye ngosuku futhi ama-42% avumile ukuhlola uhlelo lokusebenza amahlandla amaningi ngosuku olufanayo. Kuphela yi-16% yesisekelo somsebenzisi esivula uhlelo lokusebenza kanye ngesonto noma ngaphansi.
13) Abasebenzisi abazibandakanya nokuthunyelwe kokuthenga ku-Instagram
Abantu abangaphezu kwezigidi eziyi-130 basebenzisana kalula nokuthunyelwe kokuthenga (kufaka phakathi izindaba zokuthenga), okufakazela ukuqwashisa kwesici kukho konke ukufunwa kwamakhasimende nokwazisa ngomkhiqizo. Ngaphezu kwalokho, abasebenzisi bangathenga ngaphandle kokuphuma kuhlelo lokusebenza, okuchaza ukuzibandakanya okuphezulu kokuthunyelwe.
14) Abasebenzisi bezokuxhumana e-United States bethenga ku-Instagram
Cishe abantu abayi-11% e-United States, abasebenza njalo ezinkundleni zokuxhumana, bathenga nge-Instagram. Izithombe namavidiyo kungamakwa ngolwazi lomkhiqizo, kunikeze ukuvezwa nokwandisa ilukuluku lamakhasimende.
15) Ngaphezu kwengxenye yawo wonke ama-akhawunti we-Instagram adlulisa amehlo kuthebhu ye-Explorer okungenani kanye ngenyanga
Ithebhu egxile ekutholakaleni ku-Instagram lapho abasebenzisi bangamaka khona okuthunyelwe kwabo ngama-hashtag amaningi, ukwenza ukuhlola kube lula, kuyathandwa. Ukuthola okuqukethwe okusha noma ukumane ubuke okuthunyelwe ngokuya ngokuthandwa kwabo kwenziwa kube lula ngokungapheli yithebhu ye-Explorer, esizwa i-algorithm ehlukile yohlelo lokusebenza.
16) Izithombe ku-Instagram zithola ukuhlanganyela okungaphezu kuka-23% kunezithombe ku-Facebook
Isisekelo somsebenzisi esinomdlandla se-Instagram esizimisele ukubamba iqhaza futhi sihlanganyele nazo zonke izici kuhlelo lokusebenza akuyona imfihlo. Leli qiniso lilodwa libhekele ukuheha inani elikhulu labatshalizimali nabakhangisi ngokufanayo. Umehluko wama-23% ezinombolweni zokuzibandakanya ubalulekile.
17) ama-4% ama-akhawunti ahlanganyela nemikhiqizo ku-Instagram
Le nombolo ingahle izwakale sengathi iyacindezela ekuqaleni, kepha ukubeka izinto ngombono, i-Facebook ne-Twitter zombili zibona ukubandakanyeka okungaphansi kuka-0.1%.
18) Okuthunyelwe okuqukethe amavidiyo kuthola ukubandakanyeka okuningi kunokuthunyelwe ngezithombe ezimile
Lokhu akusebenzi; iso lomuntu ngokwemvelo likhangwa ukunyakaza. Ngakho-ke amaposi aqukethe amavidiyo abona ukwanda okumangazayo kwama-38% kokuzibandakanya uma kuqhathaniswa nokuthunyelwe ngaphandle kwawo.
19) Imikhiqizo enobukhona obusebenzayo ku-Instagram ibukwa kahle ngabasebenzisi
Ucwaningo luthole ukuthi abasebenzisi abangama-78% babona imikhiqizo ku-Instagram ithandwa, abayi-77% bathi bayakha, ama-76% wabasebenzisi babika ukuthi babona le mikhiqizo njengejabulisa, u-72% uthe lo mkhiqizo ubonakala uzibophezele ekwakheni umphakathi. Ukuba khona okungaguquguquki ku-Instagram nakanjani kuzoshiya umthelela kubasebenzisi.
20) Abasebenzisi abangama-70% babheka imikhiqizo ku-Instagram
I-Instagram iyithuluzi elinamandla lokwakha igama lomkhiqizo noma ibhizinisi lakho. Njengoba kubonakala kusibalo esedlule, ukuba khona okusebenzayo kuhlelo lokusebenza kushintsha umbono wamakhasimende. Ama-70% esisekelo sabasebenzisi abazimisele ukubheka imikhiqizo sikhombisa amathuba amakhulu alabo basebenzisi abathenga kusuka kule mikhiqizo.
21) Abasebenzisi abangama-80% balandela okungenani uphawu olulodwa ku-Instagram
Abantu bathanda ukuhambisana nokukhishwa okusha noma yikuphi ukunikezwa okungenzeka ukuthi imikhiqizo yenzeke ukukhishwa. Yize kulandela isinqamu esikhulu sabasebenzisi be-Instagramindlelangaphezu komkhiqizo owodwa.
22) Izithombe endabeni eposini
Ucwaningo lwamacala olwenziwe yi-Curalate (lwango-2013) luthole ukuthi izithombe ezinokuthungwa zikhiqize ukubandakanyeka okungaphezulu kuka-79% kunezithombe ezibushelelezi. Izithombe ezinesikhala esingemuva esiningi (isikhala esingesihle / esimhlophe) zithola ukuthandwa okungaphezulu kwama-29% kunalezo ezingenazo, izithombe ezinombala oluhlaza okwesibhakabhaka njengombala ovelele zithola ukuthandwa okungaphezulu kwama-24% kunezithombe ezibomvu njengombala ogqamile. Okokugcina, izithombe eziphansi ezigcwele zigcina ukuthandwa okungu-18% ngaphezulu kokugcwele kakhulu.
23) Okuthunyelwe ngendawo emakiwe kuthola ukubandakanyeka okungu-79% ngaphezulu
I-Geotagging iyindlela enhle yokuthi amabhizinisi ahlale kwi-radar yekhasimende. Kuyasiza ukuthuthukisa ukufinyelela komkhiqizo futhi kuyicindezele iye phambili kumiphumela yosesho yomsebenzisi.
24) I-hashtag eyi-1 nje ingakhuphula ukubandakanyeka nge-12.6%
I-hashtag eyodwa ebhalwe kahle ingakhuphula ukubandakanyeka kwe-akhawunti ngo-12.6% - imikhiqizo yangasese neyamagama amakhulu.
25) Ama-hashtag amade athola imiphumela emihle kakhulu
Okucacisiwe kakhulu, imishwana ethile kungenzeka ivelise i-niche ngqo oyifunayo. AmaHashtag aqukethe isilinganiso sezinhlamvu ezingama-21-24 enza kangcono kunama-hashtag aqukethe okuncane.
26) Abasebenzisi abayizigidi ezingama-400 babuka izindaba ze-Instagram nsuku zonke
Ama-80% wabo bonke abasebenzisi be-Instagram abasebenza nsuku zonke babuka izindaba zabo njengoba nje basebenzisana nokuphakelayo kwabo.
27) Sebenzisa izitika ezindabeni zakho kukhulisa ukubukwa ngo-83%
Izitika ziyindlela enhle yokwenza okuqukethwe kumnandi futhi kujabulise kepha futhi kwenza iNdaba ihehe kakhulu. Izibukeli zinamathuba amaningi okuzibandakanya nezixhumanisi noma imiyalo endabeni uma inombuzo we-quirky, i-emoji noma i-gif sticker.
28) Izikhangiso ze-Instagram zibiza ngaphezu kwalezo ezikwi-Facebook
Isilinganiso se-CPC kuzikhangiso ze-Instagram siphakeme kunaku-Facebook kepha ukubandakanyeka kuqinisekisiwe. Inqobo nje uma izithameli ezihlosiwe zomkhangisi ziku-Instagram, zizothola lokho ezikukhokhele.
29) Abasebenzisi abangu-30% babike ukuthi bathenga umkhiqizo abawutholile ku-Instagram
Kunabasebenzisi abasebenza nyangazonke abayizigidigidi ezi-1 kulesicelo futhi uma oyedwa kwabathathu abasebenzisi ethenge into ngemuva kokuyithola ku-Instagram-, akumangazi ukuthi abakhangisi nemikhiqizo bazimisele ukusebenzisa imali abayenzayo.
30) Kulinganiselwa ukuthi imali engenayo yesikhangiso se-Instagram izokwakha u-30% wemali yonke yesikhangiso se-Facebook ekupheleni kuka-2020
Lokhu kungabangelwa ukwanda kokufakwa kwezikhangiso ze-'swayipha 'ezindabeni kodwa ukusetshenziswa kwezikhangiso ku-Instagram kungaphezulu noma ngaphansi kuka-23% ngaphezulu kunamanye amapulatifomu enethiwekhi yezikhangiso ye-Facebook.
31) Abasebenzisi abangu-75% balinganiselwa ukuthi bahlanganyele nesikhangiso se-Instagram ngesikhathi esithile
Ngokuya ngemininingwane evela kuHootsuite, abathathu kwabane kubo bonke abasebenzisi be-Instagram bazoxhumana nesikhangiso abasibona ngesikhathi esithile. Vele, abanye abasebenzisi bazoxhumana nokuningi kakhulu kunesikhangiso esisodwa, futhi lokhu kuhlangana kufaka phakathi ukuchofoza ku-CTA yesikhangiso, ukubuka iphrofayili yomthengisi, noma ukuthenga.
32) Umdlali webhola uChristiano Ronaldo ungumuntu olandelwa kakhulu
Ngaphandle kwe-akhawunti yakhe ye-Instagram enabalandeli abayizigidi ezingama-360, uChristiano Ronaldo ubeke umuntu olandelwa kakhulu kuhlelo lokusebenza lokwabelana ngezithombe nabalandeli abacishe babe yizigidi ezingama-244. U-Ariana Grande uphuma isithathu ngabalandeli abayizigidi ezingama-206.
33) Ukusatshalaliswa kwenani lama-emoji asetshenziswe kokuthunyelwe kwe-Instagram kusukela ngoJuni 2019
Ngokusho kwemithombo, ingqikithi yama-52.3% wokuthunyelwe afaka ama-zero emojis, kanti ama-38.2% wokuthunyelwe afaka ama-emoji ayi-1-3. Amaposi angu-8.7% aqukethe ama-emoji angama-4-10 kanti ama-0.9% kuphela okuthunyelwe anama-emoji angaphezu kwe-10.
34) Abesifazane abaneminyaka engu-25-34 garner cishe ama-25% we-Instagram influencer follower count
Abantu abanethonya elilandelwa kakhulu ngabesifazane abaphakathi kweminyaka engama-25 nengama-34. Le nombolo ilandelwa ngabesifazane abasebasha abaneminyaka engu-18-24.
35) Abashoshozeli besilisa abaneminyaka engama-35 nangaphezulu bakleliswe isithathu ekubalweni kwe-Influencer follower count
Abashushisi besilisa abaphakathi kweminyaka yobudala engama-35 nengama-44, babamba isabelo esikhulu sesibalo sabalandeli kunokuba bekulindelekile. Kepha ubakaki weminyaka eyi-13-17 ubanga isabelo esikhulu sesibalo sabalandeli kunabathonya abaneminyaka engu-45 +.
I-Instagram ngokungangabazeki iyindawo yamandla wokuhweba nokumaketha. Ubani owayengacabanga ukuthi izoba yipulatifomu ethonya kakhulu futhi yamukelwe emhlabeni? Ukuthi izokwamukelwa ngabaholi bomhlaba nobukhosi ngokufanayo? Ukuthi kuzodala ukuhlukaniswa okusha kwemboni futhi kuchaze kabusha udumo, kanye nesimo sosaziwayo?
Emiphakathini ethile yabantu, i-Instagram ingene esikhundleni se-Facebook njengenkundla yezokuxhumana emaphakathi kakhulu. Futhi laba bakamuva babona lokhu kuza- kuthenga i- $ 1 billion dollar ngonyaka ka-2012, i-Facebook ephethwe yi-Facebook yaqhubeka nokulawula umhlaba wedijithali. Futhi ngesibalo sabo esibhakabhakeni njalo ngonyaka, i-Instagram izoqhubeka nokusetha izitayela nokulawula imakethe eminyakeni ezayo.
I-Instagram DM eku-PC - Ungawuhlola Kanjani Umlayezo?